Golihii adeegga garsoorka Soomaaliya oo la kala diray. - Wargeyska Faafiye
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala diray golihii adeegga garsoorka ee dowladda Soomaaliya.
Wareegto 11-kii bishaan kasoo baxday xafiiska madaxweynaha oo caawa soo gaartay Bar-kulan ayaa lagu xaqiijiyay kala diridda golaha oo aan saamayn doonin guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo ka tirsan golaha.
Wareegtada ayaa lagu xusay in madaxweynuhu kaladirista golaha u cuskaday dastuurka dalka, baahida loo qabo shismaaha gole garsoor oo rasmi ah, cabashooyin ka yimid bulshada iyo danta guud ee dalka iyo dadka.
Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dalbaday goleyaasha xukuumadda iyo sharcidajinta inay dhakhso u soo dhammaystiraan golaha, si loo dardargaliyo hawlaha garsoor ee dalka.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsAqooyahano iyo wax garad eedeyn kulul u jeediyay hogaanka dalka.Wasiirka gaashaandhiga oo beeniyay in wada hadal u socdo Mukhtaar Roobow.Kulan eedeyn loogu jeediyay DF oo lagu qabtay MuqdishoAMISOM oo la wareegtay laba goobood oo muhiim ahKismaayo oo Markale lagu Dagaalamay .